आत्मवृत्तान्तको ऐनामा : नेपाली कांग्रेसको गठन – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
आत्मवृत्तान्तको ऐनामा : नेपाली कांग्रेसको गठन
२०७० फाल्गुन २३, शुक्रबार ०३:२६ गते
भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा अनेकौँ पटक जेल खेपिसकेपछि दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले नेपालका निमित्त पनि केही गर्ने सोच बीपीमा पलाएको देखिन्छ । त्यसैले, ४ अक्टोबर १९४६ मा उनले एक वक्तव्य निकाले, जो सम्पादकलाई चिठीका रुपमा ‘सर्चलाइट’मा छापिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अवसरलाई उपयोग गर्न एक प्रजातान्त्रिक संगठन बनाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्नेलाई आपूmसँग सम्पर्क गर्ने अनुरोध गरिएको त्यो वक्तव्य नै यस दिशामा पहल थियो (विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आत्मवृत्तान्त ः दोस्रो संस्करण, पेज ३४) । आफ्ना भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन ताकाका सोसलिस्ट साथीहरुसँग यस विषयमा छलफल भएको र सोअनुसार सहयोग रहने आश बीपीलाई थियो, जो पूरा पनि भयो । जयप्रकाश नारायण र राममनोहर लोहियाको उल्लेख्य सहयोग उनलाई प्राप्त भएको उनले स्वीकारोक्ति गरेका छन् । जयप्रकाश नारायणसँग राजनीतिकभन्दा घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्ध थियो, तर राममनोहर लोहियाले त सक्रिय सहयोग नै गरेका थिए ।
आह्वान्को व्यापक प्रतिउत्तर पाएपछि बनारस गएर कृष्णप्रसाद भट्टराई, गोपालप्रसाद भट्टराई बालचन्द्र शर्मा अदिसँग उनले भेट गरे । दार्जीलिङमा हिन्दू–मुस्लिम दंगाबाट त्रस्त मारवाडी र अरु व्यापारिक समुदायले नेपालीले संरक्षण दिन सक्छन् भनेर उनीहरुको सहयोगमा बनेको जमातका सेक्रेटरी डी. एन. प्रधान, रूद्र गिरी, एम. डी. परियारसँगै महावीर शमशेरका एक जना साला पनि उनका सम्पर्कमा आएका थिए (उही पेज ३५), जसको सम्बन्धबाट बीपीको भेट महावीर शमशेरसँग भयो । महावीर शमशेरले उनलाई पैसा दिने बचन दिए अनि आफ्नो भाइ सुवर्ण शमशेरले पनि आपूmले जति नै पैसा दिने सल्लाह भएको बताएर काम गर्न आग्रह गरे । यस कामका निमित्त बनारस र कलकत्तामा अलगअलग कमेटी बनेको थियो । बनारसको कमिटी पैसाबिना नै चलेको थियो । त्यसैले, पार्टी बनाउने सम्मेलन कलकत्तामा नै भयो ।
यसैबीचमा बीपी र गणेशमानको भेट भई सहकार्य पनि सुरू भइसकेको थियो । तर, पहिलो गा“समै ढुंगा लागेजस्तो सम्मेलन भइसकेपछि संगठनको नाम, पदाधिकारीको निर्वाचनमा पहिलो बखेडा सुरू भयो । डिल्लीरमण रेग्मीले आपूm अध्यक्ष हुनुपर्ने दाबी गरे, तर छलफलमा बीपीको नाम सिफारिस भयो । गणेशमानको जेलमा भएका टंकप्रसादलाई अध्यक्ष बनाउने र कार्यवाहक अध्यक्ष बीपी हुने प्रस्ताव नै निणर््ाय भयो, सेक्रेटरी बालचन्द्र भए । पैसाका निमित्त महावीर शमशेरले पच्चीस हजार जयप्रकाशलाई र सुवर्ण शमशेरले पच्चीस हजार लोहियालाई दिए । यहाँनेर उल्लेख्य कुरा के छ भने सुवर्ण शमशेरको नेपाली डेमोक्रेटिक कांग्रेस छँदै थियो । दाजुसँगै पैसा दिएर उनले बीपीको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस पनि बन्न मद्दत गरे । यसरी २५ जनवरी १९४७ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको जन्म भयो, जसलाई मार्च १९४७ मै गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वले गरेको विराटनगर जुटमिल आन्दोलनमा भाग लिन जानुप¥यो । यस आन्दोलनमा बीपी, गिरिजा, तारिणी, विकु, मनमोहन र युवराज छ जना समातिएर काठमाडौँ चलान गरिए ।
बीपी समातिएपछि मातृकाले उनको अनुपस्थितिमा अध्यक्षता सम्हालेका थिए, तर बीपी फर्केर आउँदा मातृकालाई राजीनामा गराएर डिल्लीरमण रेग्मीले अध्यक्षता गरिरहेका थिए । बीपीलाई अध्यक्षता सम्हाल्ने दबाब बढ्दै जाँदा रेग्मीले कम्पनीवागमा बीपीसँग आपूm कति दिन बा“च्छु र, त्यसैले अध्यक्ष मलाई नै रहन दिनुस् भनेर गरेको अनुरोध बीपीले मानेनन् । बीपीले यसरी अध्यक्षता सम्हालेको पा“च महिनासम्म त रेग्मीसँग झगडा नै हु“दै रह्यो (उही पेज ७०) । काठमाडौँमा आफ्नो खिलाफमा विषाक्त र रेग्मीको पक्षमा प्रचार भएको समाचारले बीपीलाई काठमाडौँ गएर संगठन गर्न उक्सायो । त्यहाँ उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत सुन्दरसिंह मजिठियामार्पmत मोहन शमशेरलाई भेट्ने प्रयत्न गरे । तर, राजदूतले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन नमानेकाले यो प्रयत्न बेकार भयो । बीपीले त्यसबेला मोहन शमशेरलाई भेट्न पाएको भए के हासिल हुनेथियो, त्यो भने अनुमान गर्न कठिन छ (उही पेज ८६) । बीपी काठमाडौँमा पक्राउ परे । पछि १९४९ मा जवाहरलाल नेहरूको दबाबले गर्दा मोहन शमशेरलाई उनलाई छोड्न बाध्य बनायो ।
बीपी छुटेर आएपछि सुवर्ण शमशेरले पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव राखे, जसलाई स्वीकार गरेर दुवै पार्टीका बीचको एक शब्द हटाएर नेपाली कांग्रेसको जन्म भयो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष मातृका भएकाले नेपाली कांग्रेसमा पनि उनै अध्यक्ष भए । यसको असन्तुष्टि आत्मवृत्तान्तको पेज ११० मा यसरी आएको छ– ‘हाम्रो अध्यक्ष रहनुपर्छ भनेकाले मातृका बाबु आउनुभयो । हाम्रो तर्पmको भनेको भए मेरो नाउँ आउने थियो ।’ सेक्रेटरी सुवर्ण शमशेरको तर्पmका भए र झन्डा पनि आफ्नाले भनेको यहाँसम्म कि गिरिजाले भनेको पनि नमानेर सुवर्ण शमशेरको नै रह्यो । तर, अध्यक्ष पद र बालचन्द्र शर्मा सेक्रेटरी नहुन सकेको गुनासो भने बीपीमा रहेको नै देखिन्छ । बीपीले आपूmले बोलेको कुराबाट लेखिएको दाबी गरिएको यो पुस्तकले बताएको कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद सुरूदेखि नै भएकाले यस्ता विवादहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन नेतृत्वलाई कहिल्यै आवश्यकता भएन । यो पनि नेपाली कांग्रेसको एक प्रमुख विशेषता नै हो, विवाद भए पनि पार्टीका रुपमा मिलेर नै बस्ने ।